उम्मेद्‌वारी नदिएको पदमा पनि भीम रावलको नाम, बुटवल महाधिवेशन काण्ड दोहोरिने खतरा
सौराहा- नेकपा एमालेका अध्यक्षका उम्मेदवार डा। भीमबहादुर रावलले आफूले उम्मेद्‌वारी नदिएको पदमा आफ्नो नाम राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । दशौं राष्ट्रिय महाधिवशेनअन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि भएको चुनावमा मतदान गर्न पुगेका रावलले आफ्नो नाम केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारमा पनि देखेपछि आपत्ति जनाएका हुन् । पार्टीको…
केन्द्रीय कमिटीमा समेटिए भीम रावल र घनश्याम भुसाल
नेकपा एमालेको नयाँ केन्द्रीय समितिमा भीम रावल र घनश्याम भुसाल समेटिएका छन् । आइतवार मध्यरातमा भएको बन्दसत्रमा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष केपी शर्माले ३ सय १ केन्द्रीय सदस्यको सूची पेश गरेका हुन् । केन्द्रीय कमिटीमा भीम रावल र घनश्याम भुसालको नाम समेटिएको हो । रावलले अध्यक्षमा केपी ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा केन्द्रीय समितिका यसअघिका अधिकांश अनुहार समेटिएका छन् । केही नयाँ अनुहार समेटिएका छन् । १ सय २ जना खुल्ला सदस्यमा परेका छन् ।
नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशन निर्वाचन प्रक्रियामा गए उपाध्यक्ष भीम रावल पार्टीमा एक्लै पर्ने शेरबहादुर तामाङले बताएका छन् । महाधिवेशनस्थलमा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै तामाङले भीम रावल सहमतिमा नआए ध्वनि मतले ५ मिनेटमा बन्दसत्र टुंगाउने बताए ।उनले भने, '७ बजेबाट बन्दसत्र सुरु गर्ने तयारी छ । सहमति भएर आए नामावली वाचन गरेर बन्दसत्र सकिन्छ । भीम रावलजी सहमतिमा आउनुभएन भने ध्वनि मतको आधारमा हात उठाएर ५ मिनेटमा बैठक टुङ्ग्याइन्छ । निर्वाचन प्रक्रियामा गए पार्टीमा भीम
भीम रावल को हुन् ? (परिचयसहित)
काठमाडौं, ५ मंसिर । नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् डा. भीम रावल । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा रावल सर्वाधिक मत ल्याई उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । कडा बोलीले विपक्षीलाई प्रहार गर्ने स्वभावका उनीसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ । ४ साउन २०१३ मा अछामको साँफेबगर नगरपालिका ६ कालाआम गाउँमा जन्मिएका उनले […]
बैठक छाडेर निस्किए भीम रावल
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट बाहिरिएका छन्। बैठकमा उनले आफ्नो केही कुरा नरहेको भन्दै मौन बसेका थिए।
माधव नेपाललाई उचालेर पार्टी फुटाउन लाको भीम रावल,सुरेन्द्र पाण्डेहरुले नै हो || Som Prasad Pandey ||
सुदूरपश्चिममा एक्लिँदै भीम रावल, विश्वासपात्रले नै साथ छाडे
धनगढी : सुदूरपश्चिममा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल एक्लिँदै गएका छन्। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलियो वर्चस्व रहेका रावल एमालेमा खुलेसँगै प्रदेशमा उनकै विश्वासपात्र मानिएकाले समेत साथ छाड्न थालेका छन्।एमाले पार्टीमा विवाद भएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खरो विरोध गर्ने भीम रावल एमालेमा खुलेका हुन्। एमालेभित्रको विवादले गर्दा सात महिनासम्म रावलको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निकै दबदबा रह्‍यो। यतिसम्म कि एमालेभित्र विवाद भएदेखि रावलको अनुमतिबिना प्रदेश सरकारमा कुनै पनि निर्णय हुन सकेन। रावलको अनुमतिमा नै
भीम रावल र ईश्वर पोखरेलबीच छलफल
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल तथा महासचिव ईश्वर पोखरेलबीच छलफल भएको छ। आइतबार टोखास्थित पोखरेल निवासमा भएको भेटमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर पार्टी एकता गर्नेबारे छलफल भएको बताइएको छ। गत असार २७ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका कार्यदलबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त १० बुँदे […]
भीम रावल अलमलमा: नेपाल रोज्लान् कि ओली ?
काठमाडौं, ३१ असार । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल यतिबेला अलमलमा छन् । उनी एमाले एकताको पक्षमा अन्तिम समयमा उभिएका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टिका बाबजुद पार्टी एकता कायम राख्ने १० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । रावल यसअघि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने २६ सांसदमध्येका एक थिए । उनले […]
ओलीकै निम्तोमा भीम रावल बालुवाटारमा
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्न आइतबार बेलुकी बालुवाटार पुगेका छन्। ओली र माधव कुमार नेपालबीच सहमति जुटाउन दोस्रो पक्षका नेताहरु सक्रिय भए पनि कुनै सफलता हात लाग्न सकेको छैन। नेपाललाई प्रभाव पार्नसक्ने नेताका रुपमा ओलीकै बोलाहटमा रावल बालुवाटार पुगेका हुन्। आइतबार बिहान ओलीले सुवास नेम्वाङ, […]